आज जेठ १० गते मंगलबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् आजको दिनको सुरुवात ! « Sansar News
आज जेठ १० गते मंगलबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् आजको दिनको सुरुवात !
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०७:०७
परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्नेछ भने विवादास्पद जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ला। सहयोगी भावनाले सेवामूलक काममा प्रवृत्त गराउनेछ। प्रयत्न गर्दा नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। व्यापारतर्फ पछिका लागि सम्भावना देखिए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। स्वास्थ्यका कारण काम रोकिन सक्छ।
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा काम बन्न समय लाग्नेछ। अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपरे पनि प्रयत्न गर्दा फाइदाका स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। नियमित काम सम्पादन हुनेछन् तर कमजोर नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला। पहिलेका कामबाट सामान्य फाइदा भइरहनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ, सेवाग्राहीहरूको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
भौतिक साधन जुट्नाले नयाँ काम गर्ने उत्साह जाग्नेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। मुद्दा–मामिलामा विजयी भइनेछ। बुद्धिको उपयोगले उपलब्धि जोगाउन सफल भइनेछ। पहिले शत्रुता साध्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन्।
अवसर प्राप्त भए पनि मेसो नमिल्नाले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नाले काममा बाधा पुग्नेछ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिए पनि गुरुजनको सुझाव र सहयोग लाभदायी बन्नेछ। तत्काल लाभ नभए पनि व्यापारको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। परिस्थिति सोचेजस्तो नहुनाले फाइदा कम हुनेछ।
काम साँच्ने बानीले अवसर गुम्न सक्छ। पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। अनावश्यक हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्याउनेछ। साइनो गाँस्नेहरूको भरपर्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुन सक्छ। समयमा सजग नबन्दा शुभचिन्तकहरू समेत टाढिनेछन्। आफन्त टाढिनेछन्।
पहिलेको सफलताले महत्त्वाकांक्षा बढाउनेछ। विभिन्न अवसर पनि आउनेछन्। तर हठात् निर्णय गर्दा समस्या देखिन सक्छ। खानपान र भेटघाटको अलमलले काममा जुट्न बाधा हुनेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। मिहिनेत गर्दा नाम, दाम र इनाम हातपार्न भने सकिनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आए पनि आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन्।
२०७९ जेठ १० गते, मंगलवार, (२४ मे २०२२)
तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ–आज यी ५ राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !